အသားစုံ Sandwich နဲ့ အိမ်လုပ်ပြောင်းဖူးနို့အေးတို့ မြည်းစမ်းချင်စရာ ဘိုတွေကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကလေး
14 Aug 2018 . 5:56 PM
နေ့လည်နေ့ခင်း ထမင်းစားချိန်တွေ Diet လုပ်မယ်ဆိုပါတော့။ ထမင်းဟင်းကြီးလည်းမစားချင်ဘူး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီပြီး ဆီမပါ၊ အီဆိမ့်နေစရာမလိုဘဲ နိုင်ငံခြားသားတွေလက်မလည်အောင်ကြိုက်ကြတဲ့ ပေါင်မုန့်အသားညှပ်လေးတွေစားရရင် မမိုက်ဘူးလား?
Sandwich ကိုလေ အသီးအရွက်ကြိုက်တဲ့သူတွေရော၊ အသားဆို ကြက်၊ ဝက်၊ အမဲ၊ရှားရှားပါးပါး အသည်းနဲ့ ဥပါမကျန် အစုံအလင်ရောင်းတဲ့ Sandwich ကိုများ စားချင်မိပြီဆို…..
ဒီကိုသာလာလိုက်တော့ အစားတလိုင်းတို့ရေ။ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း Mr.Wok နဲ့ ဘေးကပ်ရက်က လောလောလတ်လတ်အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ Sandwich ဆိုင်လေးက သေးသေးလေးနဲ့ လူစည်နေလို့ အခရာက သွားရောက်စားသောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ….
ဘာတွေရလဲဆို တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ ပြောပြမယ်။
(၄) အမဲစပါးလင် အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းအသားအရသာလေးတွေကို Sandwich လုပ်ပေးတာ။ တစ်ခုတစ်ခု ဟဲဗီးခပ်ကြီးကြီးကိုမှ ၁၉၀၀ ကစတယ်ဆိုတော့…တန်လိုက်တာရယ်လို့မထင်မိဘူးလား။
သူ့ Sandwich က တခြားနဲ့မတူတာဆို အသီးအရွက်များတယ်၊ ပေါင်မုန့်သားက ကြွပ်ပြီး ခြောက်တဲ့ဘက်သွားတယ်။ ဈေးချိုသလောက် ပမာဏလည်း ကြီးတယ်။ ထုပ်ပိုးမှုလေးကလည်း စက္ကူပတ်လေးနဲ့ ဘိုဆန်ဆန်လေးဆိုတော့ Sandwich လေးတစ်ခုလောက်မှမမှာရရင် ဒီဆိုင်ကမပြန်ဘူးဖြစ်မိမှာပဲ။
အခရာက တစ်ယောက်စာ မှာခဲ့တာလေးကတော့ အမဲကြိတ်သားနဲ့ Sandwich လေးပါပဲ။ အသားတော်တော်လတ်လတ်လေးကိုကြိတ်ထားတော့ Juicy ဖြစ်တယ်။ အရသာကတော့ ဘိုဆန်တယ်။ အသီးအရွက်နဲ့ဆော့စ်များများကို ပေါင်မုန့်ကြမ်းနဲ့ ကိုက်စားရတဲ့အရသာမျိုးလေးလေ။ ဪ..ပြီးတော့ သူက ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ဘာတို့လည်းပါတော့ အစပ်ဘာညာ လိုသလိုထည့်ပဲ။ Heavy ကြီးတော့ မဖြစ်ဘူးရယ်။ အအီအဆိမ့်တွေကြိုက်တဲ့သူတော့ စားတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
အရသာကိုတော့ ကြိုက်တဲ့သူရော၊ မကြိုက်တဲ့သူရော ကွဲပြားလောက်မယ်။ အခရာကတော့ ကြယ်သုံးပွင့်လောက်ပေးချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ဒီဆိုင်လေးရဲ့ ထူးဆန်းချက်က ဘယ်မှာမှမရသေးတဲ့ အိမ်လုပ် ပြောင်းဖူးနို့ရည်၊ သီဟိုစေ့နို့ရည်၊ ဗာဒံစေ့နို့ရည်နဲ့ ဗာဒံချောကလက် နို့ရည်လေးတွေရသတဲ့။ ကော်ဘူးသေးသေးလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာထုပ်ပိုးပြီးရောင်းနေတာများ လာပါဝယ်ပါ ခေါ်နေသလိုပဲ။
သူ့နို့ရည်က လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အိမ်လုပ်တာ၊ နွားနို့လုံးဝမပါဘဲ ပြောင်းဖူး၊ ဗာဒံ၊ သီဟိုအစေ့တွေပဲကြိတ်ပြီး အချိုပေါ့ပေါ့အေးအေးလေး ဖျော်ထားပေးတာ။ အရသာက တစ်ဘူးသောက်မိရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီပြီး လတ်ဆတ်တယ် ခံစားမိမှာ သေချာတယ်။ ချိုတယ်ဆိုရုံလေး…ဆိမ့်တယ်ဆိုရုံလေးရယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၅၀၀ ကစပါတယ်။ ဆိုင်နာမည်လေးက “Great” Sandwich တဲ့။
လိပ်စာလေးက အမှတ် ၃၃၊ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်နော်။ မနက် ၇နာရီကနေ ည ၇နာရီခွဲထိ ဖွင့်ပါသတဲ့ရှင်။
ကဲ…ဒီဆိုင်လေးကို ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းထဲဝင်တုန်းခနခန ဖြတ်ဖူးနေပေမယ့် အရသာဘယ်လိုနေလဲသိချင်နေတဲ့သူတွေ ကိုယ့်အကြိုက်လေးများ ပါခဲ့ရင် သွားမြည်းစမ်းကြည့်ပါဦးလို့။ ဪ…ဆိုင်လေးက သေးသေးကျဉ်းကျဉ်းလေးပေမယ့် အပြင်ဘက်နားကခုံတန်းလေးက ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ဖမ်းလို့လည်း လှပါတယ်လို့ မောင်းတီးလိုက်ရပါတယ်ဗျို့။
အသားစုံ Sandwich နဲ့ အိမျလုပျပွောငျးဖူးနို့အေးတို့ မွညျးစမျးခငျြစရာ ဘိုတှကွေိုကျတဲ့ဆိုငျကလေး
နလေ့ညျနခေ့ငျး ထမငျးစားခြိနျတှေ Diet လုပျမယျဆိုပါတော့။ ထမငျးဟငျးကွီးလညျးမစားခငျြဘူး ကနျြးမာရေးနဲ့ညီပွီး ဆီမပါ၊ အီဆိမျ့နစေရာမလိုဘဲ နိုငျငံခွားသားတှလေကျမလညျအောငျကွိုကျကွတဲ့ ပေါငျမုနျ့အသားညှပျလေးတှစေားရရငျ မမိုကျဘူးလား?
Sandwich ကိုလေ အသီးအရှကျကွိုကျတဲ့သူတှရေော၊ အသားဆို ကွကျ၊ ဝကျ၊ အမဲ၊ရှားရှားပါးပါး အသညျးနဲ့ ဥပါမကနျြ အစုံအလငျရောငျးတဲ့ Sandwich ကိုမြား စားခငျြမိပွီဆို…..
ဒီကိုသာလာလိုကျတော့ အစားတလိုငျးတို့ရေ။ ဗိုလျရာညှနျ့လမျး Mr.Wok နဲ့ ဘေးကပျရကျက လောလောလတျလတျအသဈဖှငျ့ထားတဲ့ Sandwich ဆိုငျလေးက သေးသေးလေးနဲ့ လူစညျနလေို့ အခရာက သှားရောကျစားသောကျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ….
ဘာတှရေလဲဆို တျောတျောစိတျဝငျစားစရာလေးတှေ ပွောပွမယျ။
(၄) အမဲစပါးလငျ အဲ့လိုထူးထူးဆနျးဆနျးအသားအရသာလေးတှကေို Sandwich လုပျပေးတာ။ တဈခုတဈခု ဟဲဗီးခပျကွီးကွီးကိုမှ ၁၉၀၀ ကစတယျဆိုတော့…တနျလိုကျတာရယျလို့မထငျမိဘူးလား။
သူ့ Sandwich က တခွားနဲ့မတူတာဆို အသီးအရှကျမြားတယျ၊ ပေါငျမုနျ့သားက ကွှပျပွီး ခွောကျတဲ့ဘကျသှားတယျ။ ဈေးခြိုသလောကျ ပမာဏလညျး ကွီးတယျ။ ထုပျပိုးမှုလေးကလညျး စက်ကူပတျလေးနဲ့ ဘိုဆနျဆနျလေးဆိုတော့ Sandwich လေးတဈခုလောကျမှမမှာရရငျ ဒီဆိုငျကမပွနျဘူးဖွဈမိမှာပဲ။
အခရာက တဈယောကျစာ မှာခဲ့တာလေးကတော့ အမဲကွိတျသားနဲ့ Sandwich လေးပါပဲ။ အသားတျောတျောလတျလတျလေးကိုကွိတျထားတော့ Juicy ဖွဈတယျ။ အရသာကတော့ ဘိုဆနျတယျ။ အသီးအရှကျနဲ့ဆော့ဈမြားမြားကို ပေါငျမုနျ့ကွမျးနဲ့ ကိုကျစားရတဲ့အရသာမြိုးလေးလေ။ ဪ..ပွီးတော့ သူက ငရုတျသီးစိမျးတို့ဘာတို့လညျးပါတော့ အစပျဘာညာ လိုသလိုထညျ့ပဲ။ Heavy ကွီးတော့ မဖွဈဘူးရယျ။ အအီအဆိမျ့တှကွေိုကျတဲ့သူတော့ စားတတျမှာမဟုတျဘူး။
အရသာကိုတော့ ကွိုကျတဲ့သူရော၊ မကွိုကျတဲ့သူရော ကှဲပွားလောကျမယျ။ အခရာကတော့ ကွယျသုံးပှငျ့လောကျပေးခငျြပါတယျ။
နောကျတဈခု ဒီဆိုငျလေးရဲ့ ထူးဆနျးခကျြက ဘယျမှာမှမရသေးတဲ့ အိမျလုပျ ပွောငျးဖူးနို့ရညျ၊ သီဟိုစနေို့ရညျ၊ ဗာဒံစနေို့ရညျနဲ့ ဗာဒံခြောကလကျ နို့ရညျလေးတှရေသတဲ့။ ကျောဘူးသေးသေးလေးတှနေဲ့ ခဈြစရာထုပျပိုးပွီးရောငျးနတောမြား လာပါဝယျပါ ချေါနသေလိုပဲ။
သူ့နို့ရညျက လတျလတျဆတျဆတျအိမျလုပျတာ၊ နှားနို့လုံးဝမပါဘဲ ပွောငျးဖူး၊ ဗာဒံ၊ သီဟိုအစတှေ့ပေဲကွိတျပွီး အခြိုပေါ့ပေါ့အေးအေးလေး ဖြျောထားပေးတာ။ အရသာက တဈဘူးသောကျမိရငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီပွီး လတျဆတျတယျ ခံစားမိမှာ သခြောတယျ။ ခြိုတယျဆိုရုံလေး…ဆိမျ့တယျဆိုရုံလေးရယျ။ ဈေးနှုနျးကတော့ ၁၅၀၀ ကစပါတယျ။ ဆိုငျနာမညျလေးက “Great” Sandwich တဲ့။
လိပျစာလေးက အမှတျ ၃၃၊ ဗိုလျရာညှနျ့လမျး၊ ယောမငျးကွီးရပျကှကျ၊ ဒဂုံမွို့နယျနျော။ မနကျ ၇နာရီကနေ ည ၇နာရီခှဲထိ ဖှငျ့ပါသတဲ့ရှငျ။
ကဲ…ဒီဆိုငျလေးကို ဗိုလျရာညှနျ့လမျးထဲဝငျတုနျးခနခန ဖွတျဖူးနပေမေယျ့ အရသာဘယျလိုနလေဲသိခငျြနတေဲ့သူတှေ ကိုယျ့အကွိုကျလေးမြား ပါခဲ့ရငျ သှားမွညျးစမျးကွညျ့ပါဦးလို့။ ဪ…ဆိုငျလေးက သေးသေးကဉျြးကဉျြးလေးပမေယျ့ အပွငျဘကျနားကခုံတနျးလေးက ပနျးအိုးလေးတှနေဲ့ ဓါတျဖမျးလို့လညျး လှပါတယျလို့ မောငျးတီးလိုကျရပါတယျဗြို့။